Doorashada guddoonka BF oo laga wareejinayo Villa HARGEYSA + Sababta - Caasimada Online
Home Warar Doorashada guddoonka BF oo laga wareejinayo Villa HARGEYSA + Sababta
Doorashada guddoonka BF oo laga wareejinayo Villa HARGEYSA + Sababta
Muqdisho ( Caasimada Online) – Guddoomiyahq guddiga qaban qaabada doorashada guddoonka Golaha Shacabka, Cabdirisaaq Cumar Maxamed ayaa soo saaray go’aan la xiriira qabashada doorashada guddoonka oo lagu wado in la qabto 27 April.
Cabdirisaaq Cumar Maxamed ayaa shaaca ka qaaday inay go’aansadeen in doorashada laga wareejiyo Villa Hargeysa, sababo la xiriira amniga xarunta Baarlamaanka Soomaaliyeed.
Guddoomiyaha ayaa xusay in kulamadii ugu dambeeyey ay xarunta ku dhaceen falal amni darro sida hoobiyeyaal lagu soo tuuray dhismaha Villa Hargeysa, xilli uu socday kulanka Baarlamaanka iyo shalay oo ay ugu dambeysay oo xabad ay ku dhacday Qaboojiyaha.
Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray inay ku dadaaleen in aysan baaqan hadal jeedinta, doorashadana ay ku qaban doonaan waqtiga loo asteeyey, ayna ka dhici doonto meel kale.
“Sida ay wax u dhaceen in ay ula kac ahayd iyo in ay wiifto ku dhacday labaduba ma sheegi kari balse markii aan tagnay xarunta ayaa naloo sheegay in xabad ay ku dhacday Qaboojiyaha, maalintii dhawaad Hoobiye ayaa soo dhacay, waxaa xigay Qaboojiyaha oo xabad ku dhacday, waxa aan ku dedaalnay in aanay dib u dhicin hadal jeedinta oo aan qabaneyno maalintii 2aad, dabcan waan baddeli doonaa goobta lagu qabanayo Doorashada Guddoonka,” ayuu yiri xildhibaan Cabdirisaaq Cumar Maxamed.
Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in la qorsheynayo in doorashada lagu qabto Teendhada Afisyoone oo ay horey uga dhacday munaasabadda dhaarinta ee xildhibaannada cusub.
Dad badan ayaa u arka inay siyaasad ka dambeyso beegsiga Baarlamaanka, si dib loogu dhigo doorashada guddoonka Golaha Shacabka oo haatan loolan loogu jiro.
Xildhibaano sidoo kale ka hadlay arrintan ayaa sheegay in la doonayo in la qal-qal geliyo xubnaha cusub ee Baarlamaanka, kadibna looga faa’iideysto dano gaar ah.